သုံးစွဲရန်မသင့်ကြောင်းကြေညာထားသည့် အလှကုန်ပစ္စည်းများတွင် တရုတ်နိုင်ငံထုတ် အများဆုံးပါဝင် | ❃ Tachileik News Agency ❃ www.tachileik.net
သုံးစွဲရန်မသင့်ကြောင်းကြေညာထားသည့် အလှကုန်ပစ္စည်းများတွင် တရုတ်နိုင်ငံထုတ် အများဆုံးပါဝင်
Writen by Web Admin 12:16:00 PM -0Comments
ဈေးကွက်ရှိ အလှကုန်ပစ္စည်းများမှ ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သော ဓာတုပစ္စည်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိရသဖြင့် သုံးစွဲရန် မသင့်ကြောင်း သြဂုတ်လနှင့် စက်တင်ဘာလအတွင်း ကြေညာထားသည့် အလှကုန်ပစ္စည်း (၂၅)မျိုး တွင် တရုတ်နိုင်ငံထုတ်အများဆုံးဖြစ်ပြီး ဒုတိယအများဆုံးမှာ ထိုင်းနိုင်ငံထုတ် ပစ္စည်းများဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန (FDA) က စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်အရ အများပြည်သူလူထု သုံးစွဲရန်မသင့်တော်ကြောင်း သြဂုတ်လနှင့် စက်တင်ဘာလ အတွင်း အသိပေးကြေညာခဲ့သည့် အလှကုန်ပစ္စည်းစုစုပေါင်း (၂၅)မျိုးတွင် တရုတ်နိုင်ငံထုတ်နှင့် တရုတ်ဘာသာဖြင့် ဖော်ပြထားသည့် အလှကုန်ပစ္စည်း ( ၁၄ )မျိုး၊ ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်နှင့် ထိုင်းဘာသာဖြင့် ဖော်ပြထားသည့် အလှကုန်ပစ္စည်း (၇ )မျိုး၊ မလေးရှား၊ ပါကစ္စတန်နှင့် USA မှ ထုတ်လုပ်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည့် အလှကုန်ပစ္စည်း (၄)မျိုး ပါဝင်ကြောင်း တွေ့ရသည်။
အဆိုပါ အလှကုန်ပစ္စည်းများတွင် ပါဝင်နေကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိရသည့် အဝတ်အထည်များ အရောင်ဆိုးရာတွင်သုံးသည့် Rhodamine B အရောင်ဆိုးဆေးသည် ရေရှည်သုံးစွဲပါက နှုတ်ခမ်းကင်ဆာ၊ အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းကင်ဆာနှင့် ကျောက်ကပ်ရောဂါများ ဖြစ်ပွားနိုင်ကြောင်း သိရပြီး မာကျူရီ(ပြဒါး)သည် အရေပြားယားယံခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ အဖြူအနီကွက်များဖြစ်ခြင်း၊ အရေပြားမှတစ်ဆင့် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသို့ စုပ်ယူ၍ ထုံကျင်ခြင်း၊ ကြွက်သားတုန်ခါခြင်း၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့် စိတ်ကျရောဂါအပြင် ရေရှည်သုံးစွဲပါက ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်းနှင့် အခြားရောဂါများ ဖြစ်ပွားနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
သုံးစွဲရန်မသင့်ကြောင်း ကြေညာထားသည့် အလှကုန်ပစ္စည်းများတွင် တရုတ်နိုင်ငံထုတ်နှင့် တရုတ်ဘာသာဖြင့် ဖော်ပြထားသည့် အလှကုန်ပစ္စည်း ( ၁၄ )မျိုးမှာ တိုင်ဝမ်ထုတ် Ly-Na Medicated Pearl Paste၊ RUIQIAN A + B၊ QIANU Acarus Removed & Spots Removing Cream၊ JIAOU 12 Day’s Whitening Despeckle Treatment (Day Cream & Night Cream)၊ Guangzhou Qianya Cometics Co.,Ltd., China မှ ထုတ်လုပ်သည့် ANGKOR Cucumber Nano Whitening and Anti Wrinkle Package (Day Cream & Night Cream)၊ CAINIYA AB (Whitening Day Cream & Night Cream)၊ JIAOBI တံဆိပ် Whitening Make Up Base၊ Whitening Night Cream နှင့် Whitening & Moisturizing3in 1 Sample Sack၊ Jiao Li Speckle – Removing And Nourishing Assembly ၊ HUASHUZI Gingeng Bright White Spots- removing Set၊ MADAME Organic၊ Anti – Freckle Day Cream + Night Cream၊ JIAOLI Intensice Whitening Sunscreen and Spots Removing Set တို့ဖြစ်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်နှင့် ထိုင်းဘာသာဖြင့် ဖော်ပြထားသည့် အလှကုန်ပစ္စည်း (၇ )မျိုးဖြစ်သည့် Kim Whitening Ginseng And Pearl Cream၊ Dr.YANHEE Cosmetic Set၊ MEYYONG Seaweed Extra Whitening & Face Lift၊ Great Apple & Serum Total Perfect၊ Mamiji 66 Sixty Six Everyday Fancy Girl၊ Cleo Me’ White၊ Cosmetic Set (Yun Shi Man Cream)၊ New Citra Gold Pearly White UV Day Cream တို့ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အခြားနိုင်ငံထုတ် အလှကုန်ပစ္စည်း (၄)မျိုးဖြစ်သည့် Zenith Ventures Sdn. Bhd.,Malaysia မှ ထုတ်လုပ်သည့် Itemulawak Day & Night Cream (Beauty Whitening Cream)၊Made in USA ဖော်ပြထားသည့် Too Faced Matted Matte Liquified Matte Long Wear Lipstick၊ Kreative Cosmetics(Pvt)Ltd., Pakistan ထုတ် Due Beauty Cream၊ USA ဟု ဖော်ပြထားသည့် ENJOY White & Beauty Pearl Cream တို့မှာလည်း သုံးစွဲရန်မသင့်ကြောင်း ကြေညာထားခြင်းဖြစ်သည်။
အလှကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်း၊ ဖြန့်ဖြူး၊ ရောင်းချသည့် ကုမ္ပဏီ၊ လက်လီလက်ကားဆိုင်များသည် အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိသော ပစ္စည်းများ၊ အများပြည်သူသုံးစွဲရန် မသင့်ကြောင်း ကြေညာထားသည့်ပစ္စည်းများ တင်သွင်း၊ ဖြန့်ဖြူး၊ ရောင်းချခြင်းများ လုပ်ဆောင်ပါက ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၃၊ အပိုဒ် (၃) (ဃ)အရ အရေးယူ ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်း သိရသည်။
ဈေးကှကျရှိ အလှကုနျပစ်စညျးမြားမှ ဘေးအန်တရာယျဖွဈစနေိုငျသော ဓာတုပစ်စညျး စဈဆေးတှရှေိ့ရသဖွငျ့ သုံးစှဲရနျ မသငျ့ကွောငျး သွဂုတျလနှငျ့ စကျတငျဘာလအတှငျး ကွညောထားသညျ့ အလှကုနျပစ်စညျး (၂၅)မြိုး တှငျ တရုတျနိုငျငံထုတျအမြားဆုံးဖွဈပွီး ဒုတိယအမြားဆုံးမှာ ထိုငျးနိုငျငံထုတျ ပစ်စညျးမြားဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
ကနျြးမာရေးနှငျ့ အားကစားဝနျကွီးဌာန၏ အစားအသောကျနှငျ့ ဆေးဝါးကှပျကဲရေးဦးစီးဌာန (FDA) က စဈဆေးတှရှေိ့ခကျြအရ အမြားပွညျသူလူထု သုံးစှဲရနျမသငျ့တျောကွောငျး သွဂုတျလနှငျ့ စကျတငျဘာလ အတှငျး အသိပေးကွညောခဲ့သညျ့ အလှကုနျပစ်စညျးစုစုပေါငျး (၂၅)မြိုးတှငျ တရုတျနိုငျငံထုတျနှငျ့ တရုတျဘာသာဖွငျ့ ဖျောပွထားသညျ့ အလှကုနျပစ်စညျး ( ၁၄ )မြိုး၊ ထိုငျးနိုငျငံထုတျနှငျ့ ထိုငျးဘာသာဖွငျ့ ဖျောပွထားသညျ့ အလှကုနျပစ်စညျး (၇ )မြိုး၊ မလေးရှား၊ ပါကစ်စတနျနှငျ့ USA မှ ထုတျလုပျသညျဟု ဖျောပွထားသညျ့ အလှကုနျပစ်စညျး (၄)မြိုး ပါဝငျကွောငျး တှရေ့သညျ။
အဆိုပါ အလှကုနျပစ်စညျးမြားတှငျ ပါဝငျနကွေောငျး စဈဆေးတှရှေိ့ရသညျ့ အဝတျအထညျမြား အရောငျဆိုးရာတှငျသုံးသညျ့ Rhodamine B အရောငျဆိုးဆေးသညျ ရရှေညျသုံးစှဲပါက နှုတျခမျးကငျဆာ၊ အစာအိမျအူလမျးကွောငျးကငျဆာနှငျ့ ကြောကျကပျရောဂါမြား ဖွဈပှားနိုငျကွောငျး သိရပွီး မာကြူရီ(ပွဒါး)သညျ အရပွေားယားယံခွငျး၊ ရောငျရမျးခွငျး၊ အဖွူအနီကှကျမြားဖွဈခွငျး၊ အရပွေားမှတဈဆငျ့ ခန်ဓာကိုယျအတှငျးသို့ စုပျယူ၍ ထုံကငျြခွငျး၊ ကွှကျသားတုနျခါခွငျး၊ ပငျပနျးနှမျးနယျခွငျး၊ ခေါငျးကိုကျခွငျးနှငျ့ စိတျကရြောဂါအပွငျ ရရှေညျသုံးစှဲပါက ကြောကျကပျပကျြစီးခွငျးနှငျ့ အခွားရောဂါမြား ဖွဈပှားနိုငျကွောငျး သိရသညျ။
သုံးစှဲရနျမသငျ့ကွောငျး ကွညောထားသညျ့ အလှကုနျပစ်စညျးမြားတှငျ တရုတျနိုငျငံထုတျနှငျ့ တရုတျဘာသာဖွငျ့ ဖျောပွထားသညျ့ အလှကုနျပစ်စညျး ( ၁၄ )မြိုးမှာ တိုငျဝမျထုတျ Ly-Na Medicated Pearl Paste၊ RUIQIAN A + B၊ QIANU Acarus Removed & Spots Removing Cream၊ JIAOU 12 Day’s Whitening Despeckle Treatment (Day Cream & Night Cream)၊ Guangzhou Qianya Cometics Co.,Ltd., China မှ ထုတျလုပျသညျ့ ANGKOR Cucumber Nano Whitening and Anti Wrinkle Package (Day Cream & Night Cream)၊ CAINIYA AB (Whitening Day Cream & Night Cream)၊ JIAOBI တံဆိပျ Whitening Make Up Base၊ Whitening Night Cream နှငျ့ Whitening & Moisturizing3in 1 Sample Sack၊ Jiao Li Speckle – Removing And Nourishing Assembly၊ HUASHUZI Gingeng Bright White Spots- removing Set၊ MADAME Organic၊ Anti – Freckle Day Cream + Night Cream၊ JIAOLI Intensice Whitening Sunscreen and Spots Removing Set တို့ဖွဈပွီး ထိုငျးနိုငျငံထုတျနှငျ့ ထိုငျးဘာသာဖွငျ့ ဖျောပွထားသညျ့ အလှကုနျပစ်စညျး (၇ )မြိုးဖွဈသညျ့ Kim Whitening Ginseng And Pearl Cream၊ Dr.YANHEE Cosmetic Set၊ MEYYONG Seaweed Extra Whitening & Face Lift၊ Great Apple & Serum Total Perfect၊ Mamiji 66 Sixty Six Everyday Fancy Girl၊ Cleo Me’ White၊ Cosmetic Set (Yun Shi Man Cream)၊ New Citra Gold Pearly White UV Day Cream တို့ဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
အခွားနိုငျငံထုတျ အလှကုနျပစ်စညျး (၄)မြိုးဖွဈသညျ့ Zenith Ventures Sdn. Bhd.,Malaysia မှ ထုတျလုပျသညျ့ Itemulawak Day & Night Cream (Beauty Whitening Cream)၊Made in USA ဖျောပွထားသညျ့ Too Faced Matted Matte Liquified Matte Long Wear Lipstick၊ Kreative Cosmetics(Pvt)Ltd., Pakistan ထုတျ Due Beauty Cream၊ USA ဟု ဖျောပွထားသညျ့ ENJOY White & Beauty Pearl Cream တို့မှာလညျး သုံးစှဲရနျမသငျ့ကွောငျး ကွညောထားခွငျးဖွဈသညျ။
အလှကုနျပစ်စညျးတငျသှငျး၊ ဖွနျ့ဖွူး၊ ရောငျးခသြညျ့ ကုမ်ပဏီ၊ လကျလီလကျကားဆိုငျမြားသညျ အစားအသောကျနှငျ့ ဆေးဝါးကှပျကဲရေးဦးစီးဌာနတှငျ မှတျပုံတငျထားခွငျးမရှိသော ပစ်စညျးမြား၊ အမြားပွညျသူသုံးစှဲရနျ မသငျ့ကွောငျး ကွညောထားသညျ့ပစ်စညျးမြား တငျသှငျး၊ ဖွနျ့ဖွူး၊ ရောငျးခခြွငျးမြား လုပျဆောငျပါက ပွညျသူ့ကနျြးမာရေးဆိုငျရာ ဥပဒပေုဒျမ ၃၊ အပိုဒျ (၃) (ဃ)အရ အရေးယူ ဆောငျရှကျနိုငျကွောငျး သိရသညျ။